2011-07-03 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
security center can't be started error ​ဘယ်​လို​ဖြေ​ရှင်း​လဲ
kachin lay : ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ခင်​ဗျာ ​ကျ​နောက်​စက်​မှာ Erro ​ဖြစ်​နေ​တာ​ကို
​ဘယ်​လို ​လုပ်​ရင် ​အ​ဆင်​ပြေ​မ​လား ​မ​သိ​ဘူး ​ရှင်း​ပြ​ပေး​စေ ​ချင်​ပါ​တယ်
. ​ခု​မှ​ကွန်​ပျူ​တာ ​လေ​လာ​နေ​သူ​ပါ ​ဘယ်​လို ​မေး​ရ​မှန်း​မ​သိ​လို့ ​ဓါတ်​ပုံ ​ရိုက်​ပြီး​ပို့​လိုက်​တယ်
​ညီ​လေး​ရေ ​အောက်​က​နည်း​အ​တိုင်း​ဖြေ​ရှင်း​ကြည့်​လိုက်​ပါ .
Run Box ​ကို​ခေါ်​လိုက်​ပါ (window + R)
Run box ​ပေါ်​လာ​ရင် services.msc ​လို့​ရိုက်​ထည့်​ပြီး Enter ​ခေါက်​လိုက်​ပါ။
services box ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် . ​အဲ့​ဒီ့ box ​ထဲ​က ​ညာ​ဖက်​အ​ခြမ်း​မှာ Security Center ​ဆို​တာ​ကို ​တွေ့​အောင်​ရှာ​ပါ။
​တွေ့​တာ​နဲ့ double click ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
Startup type ​ဆို​တဲ့​အ​ကွက်​မှာ Automatic ​ဆို​တာ​ကို ​ရွေး​ပေး​ပြီး​ရင် ok ​ပေး​လိုက်​ပါ .
​အဲ့​ဒီ့​နည်း​နဲ့ ​ဖြေ​ရှင်း​ကြည့်​လိုက်​ပါ . ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ရင်​ပြေ​ပါ ​နောက်​တစ်​နည်း ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ့​မယ် .
Ultra Flash Video FLV Converter isaprogram designed by Aone Software in order to allow you to convert your videos (DivX, XviD, AVI, WMV, MPG, MPEG, MP4, M4V, FLV, 3GP, ASF, RM, RMVB, MOV, MOD, ASX, MKV, OGM, SVCD, VCD, VOB into FLV (Video Flash Encoder) and SWF.
​အ​မျိုး​အ​စား ​တော်​တော်​များ​များ​ကို convert ​လုပ်​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ် .
​တစ်​ခု​သ​တိ​ပေး​ချင်​ပါ​တယ် . skype ​ကို​သုံး​တဲ့​သူ​များ ​အ​တွက်​ပါ .
skype ​မှာ​ပါ​တဲ့ contacts >> import contacts ​က​နေ gmail account ​နဲ့ password (or) hotmail (or) facebook (or) MSN ​အ​စ​ရှိ​တဲ့ username ​နဲ့ password ​ကို ​သုံး​ပြီး​တော့ ​လုံး​ဝ ​မ​ဝင်​ပါ​နဲ့ ​သူ​တို့​ရေး​ထား​တာ​တော့ skype does not keep your password ​လို့​ရေး​ထား​ပါ​တယ် . ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ဒီ​နေ့​ပဲ ​ကျွန်​တော့်​ရဲ့ ​အ​ကောင့်​ကို ​သူ​ဝင်​လာ ​ပါ​တယ် . google ​က​လဲ ​ချက်​ချင်း​ပဲ ​ကျွန်​တော့်​ကို password ​ချက်​ချင်း ​ပြောင်း​ဖို့​အ​တွက် ​မေးလ်​တစ်​စောင်​နဲ့ ​သ​တိ​ပေး​စာ​ရောက်​လာ​ပါ​တယ် . ​အ​ခု​ချက်​ချင်း​ပဲ ​ပြောင်း​လိုက်​ရ​ပါ​တယ် . setting ​တွေ​ကို​လဲ ​ချက်​ချင်း ​ပြောင်း​လိုက်​ရ​ပါ​တယ် . ​တစ်​ကယ်​တော့ user ​တွေ​ရဲ့ ​အ​ကောင့်​ထဲ​ကို ​မ​ဝင်​သင့်​ဘူး​လို့ ​ကျွန်​တော့်​အ​နေ​နဲ့ ​ထင်​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒါ​ကြောင့် ​စာ​ဖတ်​သူ​များ​အ​နေ​နဲ့ ​ဝင်​ပြီး​တော့​များ ​မ​လုပ်​မိ​ပါ​စေ​နဲ့​လို့ ​စေ​တ​နာ​နှင့် ​သ​တိ​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ .
​ကျော်​ဆန်း​အောင် ​အ​ကို​ကျွန်​တော်​ကို magic video coventer ​တင်​ပေး​ပါ​လား
​ဟုတ်​ကဲ့ ​ကျွန်​တော် ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​ပြီ . ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ​ဗျာ . AVI, MPEG, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, VCD, DVD, SVCD, RMVB, RM, WMV, MOV, DIVX ​စ​တဲ့ format ​တွေ​ကို convert ​လုပ်​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ် .
​ချက်​ကြီး ​အ​ကို​ရေ ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြိး​တော့ ​အ​ကို​အ​ဆင်​ပြေ​ရင် ​ကျွန်​တော် ​တောင်း​ထား​တဲ့ SWF to AVI OR MPEG Coventer ​လေး ​တင်​ပေး​ပါ​အုံး​နော် ​အ​ကို....
SWF to AVI, SWF to MPEG ​ကို ​လုပ်​ပေး​နိုင်​တဲ့ converter ​လေး​ပါ . ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်​ဗျာ .​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ . ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ရင်​ပြော​ပါ ​ထပ်​ရှာ​ပေး​ပါ့​မယ်
​တောင်း​ထား​တဲ့ ​ညီ​မ​လေး​တစ်​ယောက် ​ရှိ​လို့ ​တင်​ပေး​လိုက် ​ပါ​တယ်​ဗျာ . ​အောက်​မှာ ​ပြောင်း​ပေး​နိုင်​တဲ့ format ​ကို ​ရေး​ပေး​ထား​ပါ​တယ် ...
Video and Audio Conversion. Whether you are converting between multifarious video formats (such as AVI, MPEG, WMV, DivX, MP4, H.264/AVC, MKV, RM, MOV, XviD, 3GP, and FLV), audio formats (such as MP3, WMA, WAV, RA, M4A, AAC, AC3, MP2, and OGG)
Download ifile.it | Mediaifre | Zshare | Ziddu | Megaupload